Enweghị ike imeghe ọdụ data n'ihi na ọrụ VBA dị na ya enweghị ike ịgụ
Home ngwaahịa DataNumen Access Repair Enweghị ike imeghe ọdụ data n'ihi na ọrụ VBA dị na ya enweghị ike ịgụ
Ozi zuru ezu banyere "enweghị ike imeghe ọdụ data n'ihi na ọrụ Vba dị na ya enweghị ike ịgụ" njehie
Mgbe ị na-eji Microsoft Access mepee faịlụ nchekwa data Access mebiri emebi, ị ga-ahụ ụzọ njehie na-esonụ (njehie 53) na mbụ:
Nseta ihuenyo dị ka nke a:
Rịba ama aha ozi njehie bụ "Microsoft Visual Basic for Application", yabụ ọ dị ka njehie kpatara n'ihi na ahụghị faịlụ VBA.
Pịa bọtịnụ "OK", ị ga-enweta ozi njehie ọzọ (njehie 29081):
Enweghị ike imeghe nchekwa data n'ihi na ọrụ VBA dị na ya enweghị ike ịgụ. Enwere ike imeghe ebe nchekwa data naanị ma ọ bụrụ na ehichapụ ọrụ VBA. Ihichapụ ọrụ VBA na-ewepu koodu niile site na modulu, ụdị na akụkọ. Kwesịrị ịkwado nchekwa data gị tupu ịnwa imeghe nchekwa data ma hichapụ ọrụ VBA.
Iji mepụta nnomi ndabere, pịa Kagbuo wee mezie nnomi nchekwa data gị. Iji mepee ebe nchekwa data ma hichapụ ọrụ VBA na-enweghị ịmepụta nkwado ndabere, pịa OK.
Visual Basic maka Ngwa oru na nchekwa data rụrụ arụ.
Ọ bụrụ n’ịga n’ihu site na ịpị bọtịnụ “OK” ka Access mepee nchekwa data ma hichapụ ọrụ VBA, ị ga-enweta ozi njehie nke atọ (njehie 29072), dị n'okpuru
Microsoft Access achọpụtala nrụrụ aka na faịlụ a. Iji nwaa ịrụkwa nrụrụ aka, buru ụzọ mee faịlụ ahụ ndabere. Pịa Njikwa taabụ, tụọ aka na Jikwaa wee pịa Compact and Repair Database. Ọ bụrụ na ị na-agba mbọ ugbu a imezi nrụrụ aka a, ịkwesịrị ịmegharị faịlụ a ma ọ bụ weghachite ya site na nkwado ndabere gara aga.
nke pụtara na Microsoft Access enweghị ike imeghe nchekwa data.
Ebe nchekwa data Access mbụ enweghị ọrụ VBA ọ bụla. Otú ọ dị, n'ihi nrụrụ aka, Access ga-atụle faịlụ nchekwa data rụrụ arụ nwere ọrụ VBA ma gbalịa imeghe ya. Mgbe emeghere faịlụ ahụ, ọ ga-egosipụta ozi njehie dị n'elu, nke dị ntakịrị mgbagwoju anya ebe faịlụ mbụ enweghị ọrụ VBA ọ bụla.
Nanị ihe ga-eme bụ iji ngwaahịa anyị DataNumen Access Repair imezi MDB faịlụ na idozi njehie a.
Faịlụ rụziri na DataNumen Access Repair: mydb_7_fixed.mdb